Articles Published in May, 2019 | Sagal Radio Services
Articles Published in May, 2019
« prev 1 4 5 6 7 next »
Akhriso: Xisbiga UPD oo war ka soo saaray Xaalada Maamulada Galmudug iyo Jubbaland
Sagal Radio Services • News Report • May 25, 2019
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD) ayaa soo badhigay mowqifkiisa ku aaddan xaaladda dawlad goboleedka Galmudug, doorashooyinka Jubbaland iyo khilaafka ka dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Dawlad Goboleedyada.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 25, 2019
Kullanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada warka Radio Sagal iyo Barnaamijka dhacdooyinka Todobaadkii Tagay iyo Soomaaliya oo maanta idin kaga soo baahinno Istuudiyaha Radio Sagal ee magaalada Muqdisho.
Maamulka Hirshabeelle oo ka horyimid Habraacii ka soo baxay Wasaaradda arrimaha Gudaha
Sagal Radio Services • News Report • May 26, 2019
Maamulka Hirshabeelle ayaa noqday Maamulkii u horeeyay ee ka horyimid habraacii doorashooyinka dowlad goboleedyada ee ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya, kaasoo ka koobnaa 27 qodob oo tilmaamayay habka iyo diyaar garowga doorashooyinka dowlad goboleedyada.
Garabka Galmudug ee Cadaado oo soo dhoweeyay Go’aankii Wasaaradda Arrimaha Gudaha
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo ka mid ah garabka maamulka Galmudug ee fadhigooda yahay magaalada Cadaado ayaa soo dhoweeyay go’aankii Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ee ka hadlayay habraacii iyo diyaar garowga doorashooyinka dowlad goboleedyada.
Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday Saldhigga Ciidamada AMISOM
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday Saldhigga Ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Qooqaani ee Gobolka Jubadda Hoose.
Wasaaradda Caafimaadka oo ku wargelisay Hey’adaha caalamiga in Nairobi laga raro Shirarka iyo Siminaarada lagu qaban jiray
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku wargelisay Hey’addaha UN-ka, kuwa Deeq bixiyeyaasha iyo Iskaashiga Caalamiga in aanay ka qeyb geli doonin dhammaan shirarka, Siminaarada iyo Tababarada ee ka dhacaya Nairobi, waxaa ay ugu baaqday in shirarkaas iyo Siminaarada lagu qabto dalka gudihiisa ama loo bedelo dal kale, si Wakiiladda Wasaaradda ugu fududaato dhanka safarka.
Dhageyso Warka Axadnimo ee Warbaahinta Sagal iyo Barnaamijka Nasiinada
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 26, 2019
Kullanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada warka Radio Sagal iyo Barnaamijka Nasiinada oo maanta idin kaga soo baahinno Istuudiyaha Radio Sagal ee magaalada Muqdisho.
Ciidamo Milateri oo qarax miino lagula eegtay duleedka Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 28, 2019
Qarax xooggan ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay deegaanka KM13 ee duleedka Muqdisho, kaasoo jugtiisa laga maqlay degmooyinka Deyniile, Kaxda iyo qeybo kamid ah Dharkeenleey.
Maleeshiyada Macwiisleyda oo Sarkaal Al-Shabaab ah ku dilay Shabeellaha Dhexe
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar Maleeshiyada Macwiisleyda ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaan ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Gabar 22 sano jir aheyd oo lagu dilay Gaalkacyo iyo faah faahin laga helay dilkeeda
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa dil xalay fiidkii Waqooyiga magaalada Gaalkacyo loogu geystay gabar 22 sano jir aheyd, xilli ayo ka soo baxday Masaajid ay ku soo dukatay Sallaadii Taraawiixda.